Abavelisi bePET kunye nababoneleli-China iPet factory
0.3 oz blue PET ibhotile tyaba kunye entanjeni 12-400 entanyeni
Iibhotile zethu zentsimbi ezingama-0.3oz / 8.8ml zenziwe ngezixhobo zePET. Ibhotile ithe tyaba imile njengamathontsi amanzi. Ibhotile ibonisa ukuba inokuvavanywa okanye inyangwe ngokuncamathela. Ingenziwa kunye nelogo eyenziwe yinkampani yakho ukuphucula umphumo wenkampani yakho.Ubume bebhotile yeplastikhi bumbumbene, ikunike amava okungcono kunye neshelf yokubonisa isigqubuthelo. Iplagi yokuqinisekisa ukuba imveliso iyi-100% yokutywina.Ingasetyenziselwa ukupakisha i-eyedrops, ukupakisha ioyile kubalulekile, iibhotile zokupakisha iisigarethi zombane.
0.5 oz ibhotile tyaba PET kunye 12-400 entanyeni entanjeni
Iibhotile zethu zokulahla i-0.5oz / 15ml zenziwe ngezixhobo zePET.Ibhotile yokujonga iliso engenanto isicaba ngokumila kwethontsi lamanzi. Ibhotile ibonisa ukuba inokuvavanywa okanye inyangwe ngokuncamathela. Ingenziwa kunye nelogo eyenziwe yinkampani yakho ukuphucula umphumo wenkampani yakho.Ubume bebhotile yeplastikhi bumbumbene, ikunike amava okungcono kunye neshelf yokubonisa isigqubuthelo. Iplagi yokuqinisekisa ukuba imveliso iyi-100% yokutywina.Ingasetyenziselwa ukupakisha i-eyedrops, ukupakisha ioyile kubalulekile, iibhotile zokupakisha iisigarethi zombane. Iibhotile ze-wholesales ze-dropper.
Iibhotile ezinamacala ama-2.7 ezimdaka ngebhotile engama-38-400
I-80ml ye-PET emdaka yeplastikhi ye-Vitamin Bottle yeepilisi yeepilisi zeebhotile.Izixhobo ezisempilweni kunye nezinobume bendalo.non-ityhefu kwaye ayinancasa, kulula ukuyidlala nale bhotile incinci.Iinkonzo ze-OEM: logo yoshicilelo lwesilika, ileyibhile yePhepha, ileyibhile yePlastikhi, shwabanisa. Iibhotile zepilisi zeplastiki ezimhlophe ezingenanto zingenanto. , ngaphakathi icoceke kakhulu, inokupakisha iipilisi ezingxamisekileyo, Iipilisi ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo, ukusetyenziswa okufanelekileyo. Iibhotile zepilisi zeplastiki ziyathengiswa
2.7 oz Gold-ngumfanekiswana PET ibhotile ngeenxa 36-400 entanyeni entanjeni
Imveliso 2.7oz ibhotile yegolide ye-PET. Iibhotile zeplastiki ezinesiciko segolide esibonisa ukuba ziyenzile unyango lweplating yegolide, umphumo wokupakisha ungcono kwaye umhle ngakumbi, unokwenza ibhokisi yesipho. Ibhotile yeyeza yeplastikhi inokwenziwa ukuba ibalaselise uphawu lwakho lwentengiso. eminye imibala ukuba uyafuna. Ibhotile yeplastiki
6.7oz 200ml ecacileyo PET ibhotile tyaba kunye entanjeni 24-410 entanyeni
6.7oz ibhotile yeplastiki engamanzi. Velisa imibala eyahlukeneyo ngokweemfuno zakho. Ukuba ulwelo lwakho lunemibala, ke iibhotile zendalo zePET zezona zilungileyo. Ikeplastiki, ikepusi, ukutshiza kunye nempompo ziyafumaneka. Ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokukhuseleka okucacileyo kwebhotile yeplastiki yokutya yokutya ngebhotile enokusetyenziswa njengebhotile yokucinezela. I-PET yebanga lokutya ayinatyhefu, ayinambitheki, ikhuselekile, inobuhlobo kokusingqongileyo kwaye ineempawu ezifanelekileyo zokutywina.Iinkonzo ze-OEM: Ukushicilelwa kwesikrini sesilika, ileyibhile yePhepha, ileyibhile yePlastiki, ukugoba okusongelayo. Kulula ukuphatha iimveliso zakho zokukhathalela ulusu uhamba, uyilo oluhambelanayo noluphathekayo, ungazibeka naphina, ugcine indawo kunye nokuphatheka kohambo lomoya.
I-7 oz ecacileyo ibhotile yesilinda kunye nokugqiba kwentamo eyi-68-400
Iibhotile ze-7oz zekhrimu zokwenza iinwele.Yivelisa imibala eyahlukeneyo njengoko ufuna kwaye ukuba ulwelo lwakho lunemibala, ibhotile ye-PET yendalo yeyona ilungileyo.Iplastikhi yeplastiki, ikepusi yealuminiyam kunye nempompo yekrimu ziyafumaneka. NgeCrystal Spiral Lid.Food kwiBanga lePET.Ayikho ityhefu, akukho kunuka, kukhuselekile, kuyabukeka kwaye kuyatywinwa kakuhle, ukugcina ukutya kuFresh.can kuprintwe kwiiJar, ukuprinta kwesilika-kucace kwaye kucace.
100ml elubala PET damaskeen ibhotile nge 18-410 entanyeni entanjeni
Ibhotile yeplastiki eyi-100ml. Ukuba ulwelo lwakho lunemibala, ke ibhotile yendalo yeyona ilungileyo. Iminqwazi yeplastiki, iiflip caps, izitshizi neempompo ziyafumaneka. Ibhotile yeplastiki enobungakanani bendalo, ikhuselekile kwaye iselubala yokutya ekumgangatho wokutya eneflip ephezulu inokusetyenziswa njengebhotile yokucinezela. I-PET ekumgangatho wokutya ayinabungozi, ayinambitheki, ikhuselekile, inobuhlobo kwindalo, kwaye ineempawu zokutywina. Iinkonzo ze-OEM: Ilogo yoshicilelo lwesikrini, iilebhile zephepha, iilebhile zeplastiki, shwabanisa ukupakisha. Kulula ukuyisebenzisa kwaye icocekile. Kulula ukuphatha iimveliso zokhathalelo lolusu lwakho, kunye noyilo oluncinci kunye nolunokuphatheka, ungazibeka naphina, ukugcina indawo kwaye zilungele uhambo lomoya.
6.8oz 200ml ecacileyo PET ibhotile tyaba kunye entanjeni 24-410 entanyeni
6.8oz ibhotile yeplastiki engamanzi. Velisa imibala eyahlukeneyo ngokweemfuno zakho. Ukuba ulwelo lwakho lunemibala, ke iibhotile zendalo zePET zezona zilungileyo. Ikeplastiki, ikepusi, ukutshiza kunye nempompo ziyafumaneka. Ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokukhuseleka okucacileyo kwebhotile yeplastiki yokutya yokutya ngebhotile enokusetyenziswa njengebhotile yokucinezela. I-PET yebanga lokutya ayinatyhefu, ayinambitheki, ikhuselekile, inobuhlobo kokusingqongileyo kwaye ineempawu ezifanelekileyo zokutywina.Iinkonzo ze-OEM: Ukushicilelwa kwesikrini sesilika, ileyibhile yePhepha, ileyibhile yePlastiki, ukugoba okusongelayo. Kulula ukuphatha iimveliso zakho zokukhathalela ulusu uhamba, uyilo oluhambelanayo noluphathekayo, ungazibeka naphina, ugcine indawo kunye nokuphatheka kohambo lomoya.
6.8 oz ibhotile emnyama ngeenxa zonke 60-410 entanyeni entanjeni
200ml PET amayeza amayeza zeplastiki Vitamin Bottle Ipilisi njengezingxobo Ibhotile.Easy-to-ukutsala uyilo inshorensi ilungele ukupakishwa kwamayeza aqinileyo kwaye kulula ukuthunyelwa kunye nokugcinwa.Izinto ezinempilo nezinobungqongileyo kwindalo. ileyibheli, shwabanisa urhangqo. Ibhotile yeplastikhi emhlophe emile emhlophe engenanto, ibhotile ecacileyo, intsebenzo elungileyo yokutywina .I-aluminium gasket Intsimi yokupapashwa: amayeza, iimveliso zononophelo lwempilo, ukutya njl.
5 oz emhlophe PET ibhotile ngeenxa zonke 24-410 entanyeni entanjeni
5oz 150ml ibhotile yokutshiza ukwamkela PET izinto, nto leyo ixesha elide ukuba use.Its uyilo ibhotile zeplastiki ekhethekileyo yenza ekhethekileyo ngakumbi kwaye beautiful.The ukutshiza intloko intloko kunye noyilo eyodwa ukhululekile ukuba bambelela kwaye kulula ukuyisebenzisa. Umbhobho wayo otywinwe kakuhle uya kutshiza inkungu entle, efanelekileyo kakhulu ukuba isebenze. Ifanelekile ukusetyenziswa kwekhaya kunye nokusebenza ngobuchule kweenwele. Ebhotile yeplastiki emhlophe engqukuva emhlophe. Umzimba webhotile ucacile, intle, ukutywina okuhle. Ukucofa intsimi: ukucoca iinwele ngebhotile, ibhotile engenanto, ibhotile enokuphinda igcwaliswe, izixhobo zokucheba iinwele ze salon, izixhobo zokhathalelo lwamanzi njl njl.
2.7 oz PET ibhotile ngeenxa zonke 40-410 entanyeni entanjeni
100ml PET eluhlaza Pharmaceutical Plastic Vitamin Bottle Ipilisi njengezingxobo Bottle.Light ubunzima, ifuthe ukumelana, ubungqina ukuvuza elungileyo, iipropati ezinzileyo imichiza; ilungele ukupakishwa kwamayeza amaninzi alulwelo kunye nokuqina kwaye kulula ukuyithumela kwaye igcinwe.Izinto ezinempilo nezinobungqongileyo kwindalo. , Ileyibhile yePlastiki, shwabanisa isongelo. Iibhotile zepilisi zeplastiki ezimhlophe ezingqukuva emhlophe icacile, isilungiseleli seglosi, intsebenzo yokutywina elungileyo .Aluminium gasket Intsimi ye-pplication: amayeza, iimveliso zononophelo lwempilo, ukutya njl